Adss Ikhebula Guy bacabangisise Abakhiqizi futhi Suppliers | China Adss Ikhebula Guy bacabangisise Factory
ADSS efile ekupheleni isango esetshenziswa ezigxotsheni noma imibhoshongo zensimbi ukwakhiwa nokusatshalaliswa inethiwekhi zokuxhumana ngocingo kanye fibre optic ADSS amakhebuli.
Jera ukukhiqizwa preformed umugqa uyakwazi ukulungisa wire kwakhiwa ukuphela komgwaqo ngokuhambisana ikhebula idatha ishidi amaklayenti '. Lapho amandla ukungezwani kuphezulu, kufanele kusetshenziswe Helical ADSS ukubamba ne Splice umvikeli ukuze kuvikelwe fibre umongo elimazayo ngesikhathi tensioning. Abobulili kuso, singasebenza ADSS preformed wire isango ngaphandle umvikeli lapho ukungezwani kuba ngaphansi 9 KN, nge imfimbolo noma ngaphandle kwalo.
Konke ADSS zethu ekupheleni efile bacabangisise futhi kwakhiwa wire izesekeli ziye ihlolwe kanye ukusebenzisana ugesi kanye ezokuxhumana Izinsiza ukuze anelise izidingo zamakhasimende ethu.